प्रेममा धोका के हो ? धोका पाए के गर्ने ? - Himali Patrika
प्रेममा धोका के हो ? धोका पाए के गर्ने ?
हिमाली पत्रिका १० मङ्सिर २०७६, 9:03 am
हाम्रो समाजमा प्रेममा पर्नु धोका दिने त फेशन नै बनिसकेको छ को कतिबेला प्रेम मा फस्छ को कतिबेला धोका पाउछ त्यो सजिलै बनिसकेको छ धेरै समय सम्म संगै बसेका बैबाहिक जोडी हरुपनि डिभोर्स भएको देखिन्छ त्यसैले एस्तो भएमा के गर्ने भन्ने कुरा सेयर गर्दै छौ ।
आजकलका कलिला उमेरका प्रेमीप्रेमीकादेखि वर्षौ सम्बन्धमा बाँधिएकाहरु समेत धोका दिने गर्दछन् । यसर्थ अधिकांश मानिसले जीवनमा कुनै न कुनै बेला धोका दिने वा पाउने गर्दछन् । तर धोका पाउने वा दिनेलाई धोका के हो भन्नेसमेत थाहा हुँदैन ।
धोका मानिसको सम्बन्धमा लुकाइएको सत्य वा बोलेको बचन नपुर्याउनु हो । यसको कुनै सीमा वा परिधी हँदैन । धोकालाई विश्वास र विश्वासघात बीचको अन्तरका रुपमा बुझ्दा सहज हुन्छ ।
एक अनुसन्धान अनुसार विश्वका करिब ७० प्रतिशत मानिसले कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो पार्टनरलाई धोका दिन्छन् । तर यस धोकामा प्रेममा धोका दिनु वा छोड्नु भन्ने पर्दैन ।
कुनै कुरा छल गर्नु, लुकाउनु, जानकारी नदिई गर्नु वा बताउनु पर्ने कुरा नबताउनु धोका हो । तर कतिपय मानिस प्रेममा नै धोका दिने गर्दछन् ।
यस मामलामा पहिले पुरुषहरुको संख्या ज्यादा रहेपनि हाल महिला पुरुषको संख्या बराबरी झै छ । यसरी प्रेममा धोका दिनुको अर्थ एकसँग सम्बन्धमा रहेकै बेला अरुसँग सम्बन्ध राख्नु वा अर्को पार्टनरको खोजी गर्नु हो । साथै कतिपयले पार्टनरको जानकारी बाहिर दोस्रो व्यक्तिसँग गर्ने सेक्स पनि एक प्रकारको धोका हो । जसलाई नेपाली समाजमा ठूलो धोकाको रुपमा मानिन्छ ।
धोकाको खास अर्थ चाहिँ भावनात्मक विश्वासघात हो । अर्थात बचन र मर्यादामा बाधिएको सम्बन्धमा आउने अविश्वास र दूरी नै धोका हो ।
यस्तोमा सम्बन्धमा बाधिएका मानिस धोकालाई अनैतिक मान्दछन् । उनीहरु धोका पाएपछि रुने, दुखी हुने, आफूलाई क्षति पुर्याउने वा बदलाको भाव राखी धोका दिने व्यक्तिलाई क्षति पुर्याउने कल्पना र कर्म गर्दछन् ।
धोका पाउने व्यक्तिका लागि धोकाले मानसिक र स्वास्थ्यमा असर पार्दछ । यसैकारण कतिपय मानिसको धोकाको आडमा नै सम्बन्धहरु तोडिएका छन् । तर धोका दिएको मानिसलाई एक पटकलाई अवसर दिएर उसको नैतिकता र इमान्दारिता मापन गर्न सकिन्छ ।
यदि पुनः उक्त व्यक्तिबाट धोका पाइयो भने यस्तोमा सम्बन्ध बचाउन लागीपर्नुभन्दा सम्बन्ध तोड्नु नै उचित हुन्छ ।
जहाँ मन भुलाउन जीवन त अमर छैन, सम्बन्ध कसरी अम्बर होस् भन्ने मानसिकता बसाउनु पर्छ ।